I-samsung & apos; s galaxy z flip 3 5g inokubiza imali engaphantsi kwe- $ 1,000
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isamsung kunye neeapos zeGlass Z Flip 3 5G inokuxabisa ngaphantsi kwe- $ 1,000
Isamsung kunye neeapos zeGlass Z Flip 3 5G inokuxabisa ngaphantsi kwe- $ 1,000
Inqaku le-Samsung Galaxy Z Flip 3 linikezela-LetsGoDigital x Snoreyn
Iintsuku emva kwe uyilo lokugqibela zeSamsung IGalaxy Z Flip 3 yavela kwi-intanethi, amarhe ajikelezayo malunga nokuhla kwexabiso elinokubangela ukuba i-clamshell esongekayo ingabizi ngaphezu kwefowuni yesiko.
I-Galaxy Z Flip 3 inokufikeleleka ngakumbi kune-Samsung & apos; s Flip 5G
I-tipster ethembekileyo UMax Jambor Ukwabelane ngokuvuza kumsebenzisi we-Twitter @ hwangmh01 , Owabanga ukuba i-Samsung Galaxy Z Flip 3 iza kuthengisa kwenye indawo phakathi kwe- $ 990 kunye ne- $ 1,199 e-United States xa ikhutshwa ehlotyeni.
I-Galaxy Z Flip yoqobo ifike kwi-1,380 yeedola e-US ekuqaleni konyaka ophelileyo. IGlass Z Flip 5G entsha ifike kwiinyanga ezimbalwa kamva yaza yathengiswa kwakhona nge-1,449, nangona ixabiso layo lisikiwe laya kuthi ga kwi-1,199.
Eyokugqibela ibonakala lelona xabiso liphezulu Isamsung ucinga ngeGlass Z Flip 3 yayo, kodwa ukuba uphawu lwaseMzantsi Korea luya ezantsi lunokukunceda kakhulu ukuthatha ii-smartphones ezisongekileyo eziqhelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, esi sixhobo kufuneka sibe yenye yeefayile ze- Iifowuni ezilungileyo kwi2021 .
I-Samsung Galaxy Z Flip
IGreen Z Flip 3 inokukhutshwa kwangoko nge-Agasti
Ngaphandle kolwazi lwamaxabiso kunye negama, umhla ubandakanyiwe-Agasti 3. Akucaci ngoku nokuba ngumhla wokukhutshwa kweGlass Z Flip 3 okanye umhla wokubhengezwa kweGalaxy Z Flip 3. Nangona uthathela ingqalelo ukuvuza kunye neengxelo, kukho ithuba elihle nge-3 ka-Agasti inokuba ngumhla wokukhutshwa.
Okwangoku, umsitho ongapakishelwanga I-Galaxy Z Flip 3 kulindeleke phakathi kuJulayi. Inkqubo ye- I-Samsung Galaxy Z Fold 3 kufuneka ibonakale kumsitho omnye wokushicilela. Akucaci nokuba ixesha lokukhutshwa kwalo liya kuhambelana naleyo icwecwe (kwaye mhlawumbi ifikeleleke ngakumbi) kwi-Galaxy Z Flip 3.
I-Samsung's Z Z Flip 3 kulindeleke ukuba ithumele ngeQualcomm's Snapdragon 888 ngaphakathi kunye ne-6.7-intshi ye-120Hz yokubonisa imingxunya. Iscreen se-1.4-intshi yesikrini sinamahemuhemu okuba sikumakhadi nawo.
Uyilo-lobulumko, iGlass Z Flip 3 iya kuthatha inkuthazo kwiGoogle Pixel 2 XL yoyilo olunemibala emibini edibanisa iphaneli emnyama ngaphezulu kwekhamera yangasemva kwaye ibonise ngesiqwenga seglasi. Iphaneli emnyama ihlala ijikeleze isinye kwisithathu semva, kunye nabanye beza ngombala wokukhetha wabasebenzisi.
Ukuthetha ngayo, amarhe okuba iSamsung iya kuthanda nikela ngeGlass Z Flip 3 kwibala lesibhozo lemibala -IVolet, Luhlaza, Beige, Ngwevu eMnyama, Luhlaza bumnyama, Pinki ngokuKhanya, kunye noMhlophe
Ukuphuhliswa kwesoftware isigaba somjikelezo wobomi
Eyona fowuni ilungele abantwana 2020
I-Samsung kunye neapos ye-Galaxy S10 evuliwe ihlaziywe kwi-Android 11 emva kweenguqulelo zeT-Mobile kunye neAT & T.
Eyona meko ye-Samsung Galaxy Note 5
I-T-Mobile ngoku ivumela ababhalisile ukuba bajoyine iApple kunye neapos's s inkqubo yokuphucula i-intanethi
Ixabiso leSamsung Watch kunye nomhla wokukhutshwa
I-LG G5 vs LG V10: jonga kuqala
Umda we-LG G6 vs Galaxy S7, i-iPhone 7 Plus, i-LG V20: ukuthelekiswa kwekhamera
Iimephu zikaGoogle, uhlaziyo lweWaze longeza ukudityaniswa kweSiri ye-iOS 13 kunye neCarPlay
Amaqabane eFitbit kunye noSpapchat ukuxhasa inqaku elinokubangela ukuba abanini beApple babenomona
I-Sony Xperia Z5, ixabiso leCompact kunye nePremiyamu kunye nomhla wokukhutshwa (uhlaziyo: amaxabiso e-UK kunye ne-EU)
Jonga i-T-Mobile kunye noluhlu olupheleleyo lweentengiso ze-Black Friday 2019